अक्सिजनको अभावमा संक्रमितको मृत्यु «
अक्सिजनको अभावमा संक्रमितको मृत्यु
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको बेला प्रदेश सरकारको अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने योजनाको सुरसार पनि गरिएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने बजेटको व्यवस्थापन गरेको भएपनि अस्पतालहरुले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न अग्रसर नभएका हुन् । भरखरै बजेट आएको हुनाले प्लान्ट खरिद गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नपाएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालले पनि अक्सिजन प्लान्ट थप गर्नका लागि बजेट माग गरेको भएपनि हाल मात्रै अनुमति पाएको छ । अस्पतालमा तत्कालै अक्सिजन प्लान्ट आवश्यक भइसकेको भएपनि खरिद प्रक्रियामा जाँदा ढिलो हुने भएको छ ।
जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल अफिसर डा. प्रकाश ठकुल्लाले अहिले अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने प्रक्रिया बुझ्ने काम भइरहेको बताए । उनले कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । उनले अधिंकाश संक्रमित अक्सिजन दिनुपर्ने भएपनि अक्सिजनको अभावमा उनीहरूको उपचारमा समस्या भइरहेको बताए । डोटी जिल्ला अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि दुई वटा वार्ड छुट्याइएको छ भने आठ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
अछाम जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने प्रदेश सरकारको योजनानै छैन । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा अतुल भारध्वजले अस्पतालबाट अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सहमति माग गरी प्रदेश सरकारलाई पठाएको बताए । उनले सहमति आएपछि खरिद प्रक्रिया बढाइने बताए ।
पहिले नै जडान गरेको अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन भएको नियमित उपचारमा ठिक्क हुने गरेकोमा कोभिड अस्पताललाई पनि सोही प्लान्टबाट अक्सिजन दिनुपर्ने भएकोले निकै अभाव भइरहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. हेमराज पाण्डेले बताए । उनले भरखरै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने स्वीकृति पाएकाले खरिद प्रक्रियामा जान समय लाग्ने बताए । “हामी प्रक्रिया मिलाई रहेका छौं,” मेसु डा. पाण्डेले भने, “जति छोटो प्रक्रियामा गएपनि समय लाग्छ नै । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै रहेर टेण्डर गर्नपर्छ ।”
उनले तत्कालै अक्सिजनको आवश्यक पर्ने संक्रमितहरुलाई अस्पतालकै प्लान्ट र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरी दिइरहेको बताए । तर, बजारमा अभाव सिर्जना गरिएकाले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन सिलिण्डरहरु कोरोना अस्पतालसँग छैन ।
अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियुको संख्या सीमित भएकाले अक्सिजन मात्रै दिएर पनि बचाउन सकिने बिरामीलाई अक्सिजन सिलिण्डर समयमा उपलब्ध हुन नसक्दा जोगाउन नसकिएको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जनाएका छन् । टीकापुर नगरपालिकाका एक ४६ वर्षीय युवालाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि थप अक्सिजन नपाएपछि उनको वशाख १५ गते मृत्यु भयो । घोडाघोडी नगरपालिकाका २८ वर्षीय कोरोना संक्रमित पनि वैशाख १६ गते अक्सिजनको अभावमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ज्यान गएको थियो ।
प्रदेशमा आइसियु र भेन्टिलेटर अपुग भएको बेला अक्सिजन दिएर पनि संक्रमितको ज्यान जोगाउन सकिने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताए । उनले प्रेसरमा अक्सिजन दिन सके स्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका कैयौं संक्रिमतको ज्यान जोगाउन सकिने बताए । उनले सरकारले तत्काल अक्सिजनको व्यवस्था गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
५५ शैय्याको कोरोना उपचार अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ५७ जना संक्रिमत भर्ना भएका छन् । ती मध्ये धेरैजसोलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था भए पनि भेन्टिलेटर र आईसीयूको अभाव भएकाले अक्सिजन दिएर भएपनि उपचार भइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमका अस्पताल र निजी क्षेत्रले जडान गरेको अक्सिजन प्लान्टको दैनिक उत्पादन क्षमता २ सय ३५ सिलिन्डर भएपनि खपत निकै बढी छ । यहाँका सरकारी अस्पतालहरुमा पाँच वटा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट छ । सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्रले प्रदेश बाहिरबाट आपूर्ति गर्ने गरेका छन् ।
अक्सिजन अभावमै संक्रमितहरुको ज्यान जान थालेपनि प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने योजनालाई तिव्रता दिएको छैन । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुलाई ८०÷८० लाख रूपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट जोड्न योजना पठाएको बताए । उनले महामारीलाई मध्यनजर गर्दै द्रतमार्गबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरी जडान गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन गरिएको बताए । उनले प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई समेत अक्सिजन प्लान्ट थप्न पत्राचार गरिएको बताए ।